4 Sababood oo ay muhiim u tahay in aad la socoto caadada gacalisadaada | Raganimo University
4 Sababood oo ay muhiim u tahay in aad la socoto caadada gacalisadaada
February 10, 20192 minutes
Ragg badan ayaa dhibsada xitaa in ay ka hadlaan caadada dumarka balse waxaan wada ognahay in marka gacalisadaada ay caadadu ku dhacdo in adiga xitaa arintaas ay ku saameyn kugu yeelanaysa. Caadadu waa xaalad dabiici ah oo ilaahay ku abuuray dumarka. Ninka ragga ah in uu la socdo waqtiga ay ku aadantahay caadada xaaskiisa waxay ka qeyb qaadan kartaa farxada reerka.
Sida aan wada ognahay galmada lama ogola xiliga dumarka caadadu ku dhacdo. Balse sidoo kale haddii aad tihiin reer qorsheynaya uurka gabadha waxaa muhiim ah in aad la socoto waqtiga ay gacalisadaada u badantahay in ay uur qaado iyo waqtiyada kale ee aysan bacrinta ahayn. Si aad u qorsheyso xiliga ugu haboon ee galmadu ku haboontahay waa in aad la socotaa waqtiga caadadu ay soo dhowdahay ama ay dhamaanayso.
Dumar badan ayay la soo daristaa xaalad caafimaad waqtiga caadada. Qaasatan dumarka Soomaalida ee la guday ayaa dhibaato iyo xanuun badan ku qaba caadada. In aad la socoto xaalada caafimaadka ee gacalisadaada waa mid waajib kugu ah. In aad garab istaagto waqtiga ay xanuun dareemayso waxay dhisaysaa kalsoonida iyo jaceylka idinka dhaxaysa.
Dumarka qaar ayaa waqtiga caadada waxaa ku siyaada carada iyo dabeecad xumada. Iyadoo haddii aadan la socon xaaladeeda laga yaabo in aadan ka fikirin sababta keentay xaalada. Balse haddii aad ogtahay caadada madaxa ayaad u dejin kartaa. Waxaad xasuusan kartaa in xaaladaan ay tahay mid ku meel gaar ah.
Dumarku ma jecla in ay safraan xiliga caadada maadaama uu safarku cadaadis ku siyaadinayo. Haddii aad qorsheynayso in aad safar wada aadaan, waxaa muhiim ah in aad la socoto waqtiga aad qorsheynaysaan in uu yahay mid aysan gabadhu caado qabin.